Huawei mahwendefa, ndeipi yekutenga muna 2022? - Yakagadziridzwa yekutenga gwara
Mapiritsi Akachipa Zvino
Iko kukosha kwemari
Asingasviki € 100
Asingasviki € 200
Ne skrini hombe
Tablet ine SIM card
Tablet ine kamera yakanaka
Tablet ine keyboard
Tablet ine GPS
Tablet ine pen
Huawei ndeimwe yemhando dzinonyanya kufarirwa mune Android piritsi chikamu. Chiratidzo cheChinese chine sarudzo yakanaka yemhando, iyo muzviitiko zvakawanda ine mitengo yakaderera pane vamwe vakwikwidzi vayo. Chimwe chinhu chinobatsira zvikuru kuchengetedza mukurumbira uyu pamusika. Naizvozvo, imhando yekufunga nezvayo kana uchitsvaga piritsi.
Ipapo tinotaura nezve mahwendefa eChinese brand. Kuti iwe ugone kuziva izvo Huawei inopa muchikamu ichi chemusika. Mamwe mahwendefa avo anonyanya kufarirwa mhando pamusika, izvo zvaungangoziva. Tichataura pamusoro pemahwendefa aya, nzira iyo inogona kutengwa nayo uye zvimwe zvakakosha.
1 Kuenzanisa Mahwendefa Huawei
2 Akanakisa mahwendefa eHuawei
2.1 Huawei MediaPAD T5
2.2 Huawei MediaPAD T3
2.3 Huawei MatePad T10s
2.4 Huawei MediaPad T10
2.5 Huawei MediaPad M5 Lite
2.6 Huawei MatePad 11
2.7 Huawei MatePad Pro
2.8 Huawei MatePad 10.4
3 Hunhu hwemamwe mahwendefa eHuawei
4 Huawei piritsi penzura
4.1 Huawei M Pen
5 Mahwendefa eHuawei ane Google here?
6 EMUI yakafanana ne Android?
7 HarmonyOS, iyo inoshanda sisitimu yeHuawei mahwendefa
8 Zvakakosha kutenga piritsi yeHuawei? Maonero angu
9 Huawei mahwendefa, maonero angu
10 Kupi kutenga yakachipa Huawei piritsi
11 Maitiro ekuseta zvakare piritsi yeHuawei
12 Huawei tablet makesi
Kuenzanisa Mahwendefa Huawei
Kuti ikubatsire kusarudza, pazasi iwe une tafura yekufananidza ine mahwendefa akanakisa ekambani yeChinese, ayo anosarudzwa nevashandisi:
Huawei MediaPad T3 10 ...
HUAWEI MatePad 10.4 Nyowani ...
Akanakisa mahwendefa eHuawei
Chekutanga pane zvese tinotaura nezve mamwe eaya akanyanya kukosha mamodheru ayo mhando parizvino ine mukatalogi yayo. Kutenda kwavari iwe unogona kuwana fungidziro yakanaka yeicho iyo mhando inopa vatengi maererano nemapiritsi.
Imwe yemhando dzemazuva ano dzeChinese brand mune ino yepakati-renji yemapiritsi ayo. Modhi ine zvimwe zvinhu zvakafanana neyakare piritsi. Iine skrini 10,1 inch saizi IPS, iine Full HD resolution ye1920 × 1080 pixels uye chiyero che16:10. Skrini yakanaka kana uchiona zvirimo.
Mukati mayo, sere-core Kirin 659 processor yakatimirira, ichiperekedzwa ne3 GB ye RAM uye 32 GB yekuchengetedza mukati, iyo isu tinogona kuwedzera kuburikidza ne microSD kusvika ku256 GB kugona. Bhatiri rayo rinokwanisa kuita 5.100 mAh. Sekushandisa sisitimu inoshandisa Android Oreo seyakajairwa.
Muchiitiko ichi, kamera yayo yekumberi ndeye 2 MP nepo kamera yekumashure iine 5 MP. Naizvozvo, tinogona kuvashandisa pamifananidzo kana pakutarisa magwaro nayo pasina matambudziko akawandisa. Kazhinji makamera aya anoita zvakanaka. Iri piritsi rine mwero kupfuura yekutanga, asi yakanaka sarudzo yekutora rwendo uye kuona zvirimo nenzira iri nyore.
Tafura yekupedzisira yatiri kutaura nezvayo ndeiyi. Imwe yemhando dzinonyanya kufarirwa muHuawei's catalog, mukuwedzera kuve imwe yemhando dzinotengeswa zvakanyanya. Pane mavhezheni maviri ayo, imwe ine 9.6-inch skrini uye imwe ine 7-inch skrini. Saka zvinokwanisika kusarudza iyo inonyatsokodzera iyo mushandisi ari kutsvaga panguva iyoyo. Kunyangwe iyo yakakura iri yakati kuzara.
Sezvo ichiuya ne2 GB RAM uye 16 GB yekuchengetedza mukati. Pamusoro pekushandisa Snapdragon 425 processor, inozivikanwa kwazvo pakati pepakati pa Android. Bhatiri repiritsi iyi inokwanisa zviuru gumi naRaama. Iyo yekumberi kamera ndeye 2 MP uye kumashure 5 MP. Vane mwero, asi vanoita basa ravo nemazvo nguva dzese.
Pasina kupokana, ihwendefa rakakodzera kwazvo kuona zvirimo, kutarisa kana kudhawunirodha maapplication, pamwe nekukwanisa kuitora parwendo zvakanaka kwazvo. Naizvozvo, kune vashandisi vari kutsvaga modhi yerudzi urwu, iyi Huawei piritsi ndeimwe yezvakanakisa sarudzo, maererano nekukosha kwemari.
Iyo piritsi huru yekukosha kwayo kwemari iyi MatePad T10s kubva kuHuawei. Screen yako iri 10.1 inches, inova saizi yakajairwa pamasikirini madiki emalaptop-saizi malaptop, asi akati kurei pane zvakajairika pamahwendefa anopfuura 9 inches. Sarudzo ndeye FullHD, iyo yatove yakanaka pane 15-inch laptop skrini uye zvirinani pane zvidiki.
Sezvaungatarisira mune chero smartphone kana piritsi rakakosha munyu, iyo MatePad T10s ine hombe kamera uye yekumberi kamera kana yeselfies, iri yekutanga 5Mpx uye yechipiri 2Mpx. Idzo hadzisi nhamba dzakanakisa pamusika, asi dzinosanganisira mabasa anonakidza, akadai se6 nzira dzekudzivirira maziso uye TÜV Rheinland chitupa chinoderedza mhedzisiro yechiedza chebhuruu, pakati pezvimwe zvinhu.
Nekuremekedza mamwe mahwendefa ane mitengo yakafanana, inomira kunze kwekuvakwa mumutumbi wesimbi, iyo inoita kuti iwedzere zvishoma muhuremu, asi ichigara pa 740gr uye 8mm gobvu. Mukati tinowana zvikamu zvepakati, zvakaita seOcta-Core Kirin 710A processor kana maviri maviri estereo speaker, ayo anovandudza ruzha zvakanyanya. Kana dziri ndangariro, ine 3GB ye RAM uye 64GB yekuchengetedza.
Iyo inoshanda sisitimu inosanganisirwa neyakagadzika muHuawei iyi ndeye Android 10, kunyanya iyo EMUI 10.0.1 zvichibva pane yakapfuura vhezheni yekushandisa system yeGoogle nharembozha. Asi chenjera, zvakakosha: HAZVI sanganisire masevhisi eGoogle, kusanganisira Google Play chitoro, saka avo vanosarudza piritsi iri vanofanira kuziva mawedzere kana kutsvaga mamwe maitiro.
Pakati pemahwendefa eHuawei e rakaderera isu tine yako MediaPad T10. Kudzokororwa kwem3 kunosanganisira kuchinja kushoma, sekunge iyi vhezheni itsva ine diki yekuchengetedza inotangira pa16GB uye inokwira ku64GB, ine yepakati vhezheni ye32GB. Kana iri imwe ndangariro, RAM, inowanikwa mushanduro dze2GB uye 3GB ye RAM, ese ari maviri LPDDR4x.
HUAWEI MatePad T 10 -...
Kwavakabatanidzawo kuvandudzwa kudiki kuri muprocessor yayo, kusanganisira iyi MediaPad M6 imwe yazvino Kirin 980. Kana ari mamwe mabasa, iyo M6 ​​inochengetedza yayo 10.8 ″ skrini ine resolution 1280 × 800, yayo 5MP hombe kamera uye yayo 2MP yekumberi kamera, yayo 7500mAh bhatiri uye matauriro mana, pakati pezvimwe zvakatemwa. Nezvese zviri pamusoro, tinogona kuve nechokwadi chekuti hapazove nebasa repamba ratisingakwanise kuita neruremekedzo neMediaPad M6 iyi, kusanganisira mafoto akanaka.
Iyo inoshanda sisitimu inosanganisirwa muHuawei MediaPad M6 ndeye Android 10, kunyanya a EMUI10 zvichibva pashanduro ichangoburwa yeGoogle's mobile operating system inoita kuti tinakidzwe nerutsigiro rwakarebesa kana tikaienzanisa neyakare vhezheni yetablet.
Isu tinotanga neiyi modhi, yepakati-renji Huawei piritsi, iyo yakanaka kukosha kwemari. Iyo ine 10,1-inch screen saizi, ine Full HD resolution ye1920 × 1200 pixels. Uye zvakare, ine akati wandei maitiro ekushandisa, ayo anobvumira maziso ako kuti asaneta kana uchiishandisa.
Iyo inouya nesere-core processor, kuwedzera kune 4 GB ye RAM uye 64 GB yekuchengetedza mukati, iyo inogona kuwedzerwa kusvika ku256 GB. Isu tine zvese kumberi nekumashure kamera pahwendefa, ese 8 MP. Chii chimwe, bhatiri rayo rinokwanisa kuita 7.500 mAh, iyo inopikira kuzvitonga kwakanaka nguva dzose. Iyo ine zvakare nekukurumidza kuchaja.
Chimwe chezvakanakisa zveiyi Huawei piritsi ndeyekuti ine 4 Harman Kardon Certified Stereo Speakers. Saka iyo odhiyo chinhu chakanyatso tsvinda. Kazhinji, ipiritsi yakanaka yekugona kushandisa zvirimo nenzira iri nyore. Dhizaini yakanaka uye iri nyore kushandisa.
HUAWEI MatePad 11 -...
Iyi piritsi yechitatu ingangove imwe yeanonyanya kufarirwa uye akakosha modhi muHuawei's catalog. Inosvika na 11-inch saizi IPS skrini, ine resolution ye2,5K uye 120hz. Pasina kupokana, iyo yemhando yepamusoro skrini, iyo yakakwana kana tasvika pakuona zvirimo. Mukati mayo ine Qualcomm Snapdragon 865 processor, iyo ine simba zvakanyanya muhwendefa remhando.
Iine 6 GB ye RAM uye 64 GB yekuchengetedza mukati, iyo yatinogona kuwedzera kusvika kuhuwandu hwe512 GB tichishandisa microSD card. Bhatiri repiritsi iyi i7.500 mAh simba, iro rinovimbisa kuzvitonga kukuru, mukuwedzera pakuva nechaji yekutsanya mairi. Audio ndiyo imwe nharaunda yakatorwa dambudziko rakawanda, iine huwandu hwevatauri vana vestereo, kupa chiitiko chiri nani.
Iyo yekumberi kamera ndeye 8 MP uye kumashure 13 MP. Pasina mubvunzo, makamera maviri ane simba ehwendefa, iyo yekutora mapikicha makuru kana vhidhiyo, pamwe nekukwanisa kushandisa iyo yekumberi mumavhidhiyo mafoni, kana ichishandiswa basa. Ipiritsi yemhando yepamusoro, kuwedzera pakuva yakanyanya simba uye inogoneka. Zvakakwana kwazvo.
Iri piritsi rechina pane rondedzero nderimwe rinonyanya kuzivikanwa muChinese brand's catalog. Idiki pane zvataona kusvika pari zvino. Nekuti mune yako une a 10,8-inch IPS skrini ine 2K resolution. Mukati, ane simba kwazvo Kirin 990 processor akatimirira.
Iine 6 GB ye RAM uye 128 GB yekuchengetedza mukati, iyo yatinogona kuwedzera kusvika ku1TB kuburikidza ne microSD pasina dambudziko. Kana riri bhatiri, inokwanisa zviuru gumi naRaama. Zvakadaro, inovimbisa kuzvimiririra kwakanaka kwevashandisi, nekuda kwekusanganiswa kwayo ne processor.
Iwo maviri makamera akafanana 13 MP, iyo inobvumirawo kurekodha vhidhiyo pa1080p / 60fps. Tafura yakanaka, yakati diki, asi ine simba. Nechikonzero ichi, inogona kushandiswa mubasa kana zvidzidzo, asiwo kushandisa zvirimo kana kufamba nekunyaradza kwakazara.
Kana isu tichitsvaga piritsi rakachipa, isu tine sarudzo mbiri: tsvaga chimwe chinhu chakashata brand kana chimwe chinhu senge MatePad 10.4 kubva kuHuawei. Pasina kukwidziridzwa, vanotova nemutengo unonakidza kwazvo, asi kana tikautenga muchitoro chakasarudzika Tinogona kuiwana isingasviki € 300. Uye tichawanei pamutengo iwoyo? Iyo inokwanisa kwazvo yepakati-renji piritsi rekuita chero basa.
Iyo skrini saizi yeMatePad 10.4 iri 10,4 inches, iyo idiki pane yakajairika saizi, asi zvakare inchi yakakura pane iyo mini saizi iwo. Mabezel ayo ari madiki zvachose, sezvo aine mativi akatetepa e4.9mm chete. Yechii chiri kumberi, 80% skrini. Inomirawo pakugadzirwa kwayo, ine muviri wesimbi une mipendero yakatenderedzwa iyo ichaita kuti tinzwe kuti takatarisana nepiritsi yepamusoro, kunyange zvazvo izvi zvose, pamwe chete nehuremu hwe460gr chete, ndizvo zviri kunze.
Mukati, zvinhu zvakanyanya kuderera-kiyi, ne64GB yekuchengetedza iyo ichave yakakwana kune avo vanoda kudya zvinyorwa uye kuchengetedza mafaira mashomanana, asi asina kukwana kune avo vanoda kuchengetedza mimhanzi yakawanda, mavhidhiyo kana mitambo inorema. Uye kutaura nezvemitambo, imwe ndangariro ndeye 4GB ye RAM, iyo ichave yakawanda kupfuura zvakakwana kufambisa mitambo yakawanda yemafoni, hazvizove zvakanaka kufambisa mutambo unorema. Chikamu chemagetsi chaizopedzwa neMediaTek's Octa-Core chipset.
Piritsi iri zvakare haina masevhisi eGoogle, saka hatizokwanisi kuisa software kubva kuGoogle Play, semuenzaniso, saka vashandisi vanoiwana vanofanira kuziva imwe nzira. Asi, hey, nemutengo wavari kutibvunza, ndinofunga huipi hushoma.
Hunhu hwemamwe mahwendefa eHuawei
Iyo yeChinese tekinoroji hofori, Huawei, haina kungomira pachena kune yayo tekinoroji tekinoroji, zvakare yakaziva nzira yekuenda zvakanaka kune zvese zvimwe zvigadzirwa, senge mahwendefa ayo. Inoratidza mune zvese, ne zvinhu zvinoshamisa chaizvo akadai se:
2K FullView kuratidza: mamwe mahwendefa eHuawei anoisa pani ine 2K resolution, iyo inovapa yakakura yemhando yemhando uye yakakwirira pixel density, kunyangwe ichishandiswa padhuze. Pamusoro pezvo, vanoshandisa tekinoroji yeFullView, ine hupamhi hukuru nekuda kwekuve nemafuremu akatetepa kwazvo. Vamwe vagadziri vanodaidzawo tekinoroji iyi "infinity screen", asi ivo vanotaura nezvechinhu chimwe chete.
Harman Kardon Quad Stereo VatauriKana iwe uchida kunakidzwa neruzha rwemhando yenhevedzano yako, mabhaisikopo, kutepfenyura, kana mimhanzi yako, iwe unozoda mahwendefa aya, sezvo ivo vanoisa zvitauriri zvestereo zvine quadruple transducer, kune ine simba uye yakapfuma ruzha. Pamusoro pezvo, ruzha rwakasarudzirwa mahwendefa aya hachingori chero, asi imhando yeHarman Kardon, imwe yemafemu ane mukurumbira muchikamu ichi uye yave kugadzira imwe yeakanakisa manzwi emudziyo pamusika kubvira 1953.
Wide angle kameraKunyangwe mahwendefa mazhinji asingakwidzi ma sensors emhando, mune yeHuawei yakashongedza mahwendefa ayo ane yakakura-ekona kamera sensors. Ndiko kuti, iyo yakatarisa kureba ipfupi pane iyo yeakajairika lenzi. Mhedzisiro ikona yekuona yakakura kupfuura kuona kwemunhu, kune yakanakisa panoramic shots uye nzvimbo.
Aluminium dzimba: Kusiyana nemamwe mahwendefa eChinese asina kunaka, Huawei asarudza kupera kwealuminium. Izvi zvinovapa kubata kwakanaka uye kunonakidza, kupikisa kukuru kupfuura epurasitiki, uye ivo vakanyanya kunaka kubva pakupisa kwekuona. Iyi simbi iri nani yekupisa conductor pane epurasitiki, uye ichaita seyakakura heatsink, ichiita kuti vadziye zvishoma.
120hz kuratidzaKana iwe uchitsvaga yakanyanyisa kunyungudika kana uchitamba mitambo, uchiona mabhaisikopo kana kungofamba uchitenderedza chimiro chezvishandiso zvaunoshandisa mazuva ese, mahwendefa eHuawei ane 120Hz skrini anokufadza.
Huawei piritsi penzura
Huawei akagadzirawo yakanakisa inopindirana piritsi rako, senge peni yako yedhijitari M Pen:
Huawei M-Penzura ...
Iyo peni yedhijitari yakavakirwa pane inoshanda capacitive tekinoroji. Mudziyo une a pressure senitivity inosvika 4096 mazinga, kuwedzera kururama. Mukuwedzera, inotengeswa nekunyatsochenjerera dhizaini, mune metallic grey kupera, uye ine magiramu makumi mashanu chete ehuremu.
Inopindirana nemapiritsi Huawei MatePad uye inobatanidza bhatiri reLi-Ion rinogara kwenguva refu kuitira kuti usazvinetse nezve kuchaja kwenguva yakareba. Inobvumirawo kuchaja isina waya, uye zvinongedzo kune piritsi uchishandisa Bluetooth tekinoroji.
Mahwendefa eHuawei ane Google here?
Huawei akakwanisa kusvika ikoko kare mu5G, uye kuve piyona mune iyi tekinoroji nyowani. Yakatarisana nekusakwanisa kwemhando dzeAmerica kukwikwidza neHuawei, hurumende yeUS yakafambisa michina yayo kutanga geopolitical war neChina, uye neveto yakakurumbira yakatemerwa femu iyi.
Muchokwadi, zvirambidzo zvingave nehunyanzvi hwakashata hweHuawei, asi zvadaro hazvina kuitwa nenzira yakaoma kudaro. Mhedzisiro chete yayakave nayo kune iyi mhando yemapiritsi ndeyekuti iyo system inouya isina iyo GMS masevhisi uye pre-yakaiswa Google maapuro, kunyangwe ichiri yakakosha Android uye inogona kuiswa nemaoko. Naizvozvo, zero madhirama mupfungwa iyoyo. Kana iwe uchida Google Play uye mamwe masevhisi, anogona kuiswa uye anoenderana zvizere.
Kazhinji, hauzovada, Huawei yakagadzira yayo mamwe masevhisi anonzi HMS (Huawei Mobile Service), zvakafanana neGMS. Aya masevhisi anosanganisira huru imwe app chitoro inonzi AppGallery. Ikoko iwe unowana Googlefier, Gspace, kana LZPlay, ari maapplication aunokwanisa kuwana masevhisi eGoogle paHuawei zvishandiso.
Somuenzaniso, kuti une Google Play, unogona kutevedzera nhanho idzi:
Dhawunirodha iyo Googlefier app kubva kuAppGallery.
Gadzirisa mvumo inokuudza izvo app inoda kushanda.
Tevera mirairo yemubatsiri wako.
Pakupedzisira, iwe unenge uine Google masevhisi uye iwe unozogona kupinda muakaundi yako.
EMUI yakafanana ne Android?
Mabhuranzi mazhinji, akadai seSamsung (One UI), Xiaomi (MIUI), LG (Velvet UI), nezvimwewo, panzvimbo yekushandisa Android sezvazviri, wedzera a maitiro ekugadzirisa kuvandudza mamwe mabasa kana kugadzirisa chitarisiko. Asi pasi peiyo layer pane Android. Muchokwadi, pane Samsung Galaxy, une iwo akaturikidzana uye hapana anokahadzika kuti uri kushandisa Android seyo inoshanda sisitimu. Chimwe chinhu chakafanana chinoitika muHuawei zvishandiso, iyi chete femu inoidaidza kuti EMUI.
EMUI Ingori iyo dhizaini yekugadziridza iripo paAroid, asi izvo hazvikanganisi kuenderana. Zvese zvinoshanda pane yakachena Android zvinoshanda pamatanho aya zvakare. Pamusoro pezvo, iyo EMUI vhezheni inokupawo zvinongedzo nezveiyo Android vhezheni iri kushandiswa. Semuyenzaniso, EMUI 8.x inoenderana neAndroid Oreo (8.x), ukuwo EMUI 9.x yaive yakatuniwa Android Pie (9.0), kana EMUI 10.x an Android 10, zvichingodaro.
HarmonyOS, iyo inoshanda sisitimu yeHuawei mahwendefa
Sezvaunoziva, pashure Geopolitical hondo dzeUS neChinaImwe yemakambani akaiswa neWhite House parunyoro yaive yeChinese Huawei. Chikonzero chaive chekuti yaive mberi zvakanyanya maererano ne5G tekinoroji, nepo mamwe makambani eAmerica aive asina zvakawanda zvekuita. Uye, kuti inonoke kufambira mberi kwayo zvishoma, vakatanga zvimwe zvirambidzo zvekushandisa mamwe masevhisi senge Android, GMS, nezvimwe. Naizvozvo, Huawei aifanira kugadzira yayo yega sisitimu yekutsiva yeGoogle:
Zviri sei?: iyo sisitimu yekushandisa yakagadziridzwa naHuawei uye yakavakirwa paiyo Android source kodhi (ine multikernel, zvichienderana nechikamu chayakagadzirirwa), saka inozotsigira ese anoenderana maapplication (APK) neGoogle system. Chimiro chayo chakafananawo neAroid, asi chinoshaya Google Mobile Services (GMS), iyo yakatsiviwa neHMS (Huawei Mobile Services) kuti ipfuure zvirambidzo uye kupa vashandisi vayo imwe nzira inoshanda.
Ndeipi misiyano neEMUI?: ndiyo acronym yeEMotion UI, uye inotova tsika yakasikwa naHuawei pa Android. Ndiko kuti, inonyatso Android, asi chimiro chayo uye mamwe mabasa akagadziridzwa. Uye zvakare, iyo inogadziridza sisitimu inopihwa neHuawei pachayo, uye inogona kusiyana kubva kune yekutanga yeAroid, zvese munguva uye mune zvirimo. Zvinoonekwa uye nezvinangwa zvekushandisa, zvese EMUI neHarmonyOS zvakangofanana, kunyangwe iyo yekupedzisira ine mabasa matsva, haitenderi mudzi, uye ine mamwe maapplication nemasevhisi ayo ega.
Unogona kuisa mapurogiramu kubva kuGoogle Play?: hongu, HarmonyOS uye EMUI inoenderana zvizere nemaapuro ese anowanikwa natively for Android. Izvo zvisingabatanidzi iGoogle Play chitoro, sezvo yakatsiviwa nechitoro chayo chiri cheiyo HMS, uye inonzi Huawei AppGallery. Nekudaro, zvinokwanisika kuisa iyo apk kubva kuGoogle Play nemaoko, kunyangwe isina kufanomisikidzwa nekumisikidza. Muchokwadi, kune akawanda tutorials eizvi, sezvingaitwa muFireOS, kune avo vanosarudza imwe nzira kuAmazon Appstore.
Une masevhisi eGoogle here?: kwete, haina MSG. Izvi zvinosanganisira injini yekutsvaga yeGoogle, Chrome web browser, chitoro cheGoogle Play, YouTube, Google Mepu, Dhiraivha, Mapikicha, Pay, Mubatsiri, nezvimwe. Pane kudaro shandisa iyo HMS, ine dzimwe nzira dzakadai seAppGallery, Huawei Vhidhiyo, Huawei Music, Huawei Wallet yekubhadhara chikuva, Huawei Cloud, yayo yewebhu browser, uye Celia virtual mubatsiri, pakati pemamwe maapplication nemasevhisi. Ndiko kuti, zvakakwana kuti usapotsa GMS.
Zvakakosha kutenga piritsi yeHuawei? Maonero angu
Mhinduro yekuti zvakakosha kutenga piritsi yeHuawei ndeye hongu anonzwika. Iyi mhando inopa inonakidza mhando, tekinoroji uye maficha, pamwero wemamwe emhando yepamusoro, asi nemutengo unokwikwidza.
Ndiyo imwe yedzakanakisa nzira dzekutora piritsi ne Kukosha kukuru kwemutengo, asi pasina kusava nechokwadi kuti mamwe ma brand asingazivikanwe anogona kukuunzira iwe. Mamwe mabhureki anogona kunge asina kunaka kweungano, kuti basa ravo rehunyanzvi harina kukwana kana chimwe chinhu chikaitika, kana kuti vanoisa zvinhu zvakati wedzerei. Zvese izvo hazvisi kuzove zvakadaro muHuawei.
Mukuwedzera, mamwe zvinyorwa Sezvo mhando yekupedzisa kwayo, skrini yayo, hardware yayo yepamusoro-soro, ruzha rwemhando, OTA-inokwidziridzwa system yekushandisa, kana kubatana kwayo kwe5G mune mamwe mamodheru ayo, inoita kuti inakidze.
Pfungwa isina kunaka chete, hongu inogona kunzi negative, ichokwadi ichocho usauye neGMS pre-yakaiswa, seyo default system. NeHMS une zvese zvaunoda kuti usarasikirwe neGoogle masevhisi, saka hapana chikonzero chekutya. Nekudaro, kana nekuda kwechimwe chikonzero chakanyanya iwe unofanirwa kushandisa masevhisi eGoogle, unogona kugara uchiaisa nemaoko.
Huawei mahwendefa, maonero angu
Kutenga mahwendefa eHuawei kune zvakawanda zvakanakira vashandisi. Chimwe chezvinhu zvinonyanya kukosha mutengo. Sezvatambotaura, Huawei imhando inotisiya nemapiritsi emarudzi ese, asi izvo zvine mitengo yakaderera. Mazhinji emapiritsi ayo akachipa kupfuura mamodheru ane zvirevo zvakafanana, asina kumbove akaipisisa maererano nemhando.
Kunze kwekuve imwe yeakanakisa mahwendefa emhando-mutengo , vanozivikanwa kuwana kuvimba kwevatengi nezvigadzirwa zvavo. Sezvo iri imwe yemhando dzinotengeswa zvakanyanya pasirese, zvakare muSpain. Iko kukosha kwakanaka kwemari zvezvigadzirwa zvavo chinhu chakabatsira. Mukuwedzera, zviri nyore kuzviwana muzvitoro. Saka haisi dambudziko kune vashandisi.
Warranti yaive chikamu chakasimudza kusahadzika kwakawanda kune vashandisi munguva yakapfuura. Kunyanya apo akawanda emapiritsi anga asiri kutengeswa muEurope. Asi ikozvino, sezvo isu tichigona kuvatenga muSpain, vimbiso ndeyeyeEurope. Naizvozvo, Iwe une waranti yemakore maviri pakutenga piritsi rakataurwa. Muchiitiko chezvinetso iwe unogona kugara uchienda kune marashi, iyo inotsiva iyo kana kugadzirisa dambudziko nguva dzose. Hapana chekunetsekana nacho panyaya iyi.
Kupi kutenga yakachipa Huawei piritsi
Kune avo vashandisi vanofarira kutenga chero mahwendefa eChinese brand, chokwadi ndechekuti zviri nyore chaizvo kuvawana muSpain, zvese muzvitoro nepa online. Naizvozvo, inyaya yekusarudza yakanyanya kugadzikana sarudzo paunotenga imwe.
mhaswa: Iyo hypermarket cheni inotengesa mahwendefa emhando dzakasiyana siyana, kusanganisira Huawei. ndinoziva vanogona kutenga muzvitoro zvakawanda, uko iwe une mukana wekuona piritsi ichirarama, uchikwanisa kuinzwa uye kuiedza muchidimbu. Kuitira kuti mushandisi awane fungidziro yakanaka pamusoro payo uye nekudaro anoziva kana iri modhi inoenderana nezvavari kutsvaga.
Dare reChirungu: Cheni inozivikanwa yezvitoro ine sarudzo yakanaka yemapiritsi anowanikwa, muzvitoro uye online. Zvakare, pane mukana wekuzviedza uye kukwanisa kuona kana iri modhi inoenderana nezvauri kutsvaga panguva iyoyo. Ivo havana akawanda maHuawei modhi sezvimwe zvitoro, asi mahwendefa emhando yepamusoro anowanzo kuwanikwa.
MediaMark: Zvitoro zvemagetsi zvecheni iyi zvine sarudzo yakakura yemapiritsi, nemhando dzakawanda dzeHuawei, kunyanya ichangoburwa yemhando. Naizvozvo, isarudzo yakanaka yekufunga nezvayo. Sezvo mune zvimwe zviitiko mitengo yakati dzikamei kana kuti vanokwidziridzwa nguva nenguva, izvo zvinogona kubatsira kuwana mutero.
Amazon: Chitoro chine sarudzo huru yemapiritsi pamusika, pamwe nemhando zhinji dzeHuawei dziripo. Naizvozvo, isarudzo yakasununguka yekufunga nezvayo, nekuda kwekusiyana kwemhando. Chii chimwe, kazhinji pane zvidzikiso pawebhu, iyo inovandudzwa vhiki imwe neimwe. Saka zvinokwanisika kutenga chero mahwendefa eChinese brand pamutengo wakaderera.
FNAC: Chitoro chemagetsi ndeimwe nzvimbo yakanaka yekutenga piritsi yeHuawei. Sezvo vaine akati wandei mamodheru, ese ari online uye muzvitoro zvavo. Nokudaro, vakakodzera kubvunza. Mukuwedzera, kune avo vanobatana navo, zvinokwanisika kuwana mutero pakutenga, izvo zvisina kumbokanganisa.
Maitiro ekuseta zvakare piritsi yeHuawei
Nzira yekuseta patsva piritsi yeHuaweini handina kusiyana zvakanyanya nenzira iyo mamwe mabhureki paandroid vanoshandisa. Kugadzirisazve tablet chinhu chinofanira kuitwa chete kana chichizotengeswa kana kuti pave nechinetso chakakomba, kuitira kuti zvinhu zvose zvigadziriswe uye zvakasiiwa zvakafanana zvakasiya fekitari.
Nokuda kweizvi, iwe unofanirwa dzvanya uye bata vhoriyamu kumusoro uye simba mabhatani kwemasekonzi mashoma, kusvikira menyu yekudzoreredza ichioneka. Mariri mune nhevedzano yezvasarudzo, imwe yacho iri reset kana fekitori reset / kupukuta data. Nevhoriyamu kumusoro nekudzika mabhatani unogona kufambisa imwe mune yakataurwa menyu uye usvike iyo sarudzo. Ipapo iwe unongofanidza kudzvanya bhatani remagetsi pane iyo sarudzo. Ipapo ichakumbira kusimbisa uye maitiro ekugadzirisa zvakare piritsi reHuawei anotanga panguva iyoyo.
Huawei tablet makesi
Sezvakaita ma smartphones, zvinokurudzirwa kugara uine chivharo yekushandisa ne tablet. Tafura chinhu chisina kusimba, chinogona kukuvadzwa nemadonhwe kana mapundu, kunyanya skrini yayo yakakosha uye inogona kutambura zvakanyanya. Naizvozvo, kushandisa nyaya neHuawei piritsi rako kunokosha.
Kusarudzwa kwemavhavha eHuawei mahwendefa akafara kwazvo. Kunyanya muzvitoro zvakaita seAmazon zviri nyore kuwana sarudzo yakakura. Izvo zvinoenderana nekuravira kwemushandisi wega wega, rudzi rwechifukidziro chinozosarudzwa nacho. Sezvo kune marudzi akawanda.
Tine matehwe makesi, ane chivharo, iyo ndiyo inonyanya kukosha, kuitira kuti chivharo chizarurwe kana tablet inoshandiswa. Izvo zvinopikisa, zvehutano hwakanaka uye zvinodzivirira piritsi rose, chimwe chinhu chinokosha pasina mubvunzo. Iwo madhizaini anowanzo kuve echinyakare mupfungwa iyi, kazhinji ane mavara akasimba. Asi ivo isarudzo huru yekushandisa. Mukuwedzera, mazhinji acho anogona kupetwa, kuitira kuti isu tigone kushandisa piritsi patafura sekunge iri laptop, kana kuwedzera inotakurika keyboard kwairi.
Kune rumwe rutivi, dzimba dzinogona kushandiswa, sezvakaita nharembozha. Iko hakuna zvakawanda zvingasarudzwa panyaya iyi, asi zvinogona kuwanikwa muzvitoro. Vanodzivirira muviri wose kubva pairi. Asi ivo vanobvumira kushandisa piritsi nenzira yakasununguka mune dzakawanda zviitiko. Saka ivo isarudzo yakasununguka uye yakakurumbira. Panowanzove nemhando dzakasiyana-siyana dzekugadzira.
Kana wasvika apa, ndezvekuti hausati wanyatsonzwisisa
Unoda kushandisa marii?:
* Fambisa inotsvedza kuti uchinje mutengo
Mahwendefa akadhura » Best tablet brands » Hwendefa Huawei
Mamwe mahwendefa akachipa angakufarira:
Ndeipi iPad yekutenga?
2 mhinduro pa "Tablet Huawei"
2017-06-20 at 1:44 am
Ndanga ndichitsvaga piritsi kwenguva refu. Ndakanga ndatoona kuti imhando yeHuawei, handinzwisise zvakanyanya nezve mahwendefa asi kuti vakatanga sei kutaura kuti Huawei aizopa matambudziko nekuti ndakasiya. Ndirikuda basa, ndiri mutengesi, iyi brand ichiri sarudzo yakanaka here?
2017-06-10 at 4:41 pm
Huawei nhasi imhando yakavimbika yakavimbika, kunyangwe ukatenga chigadzirwa chake hachisi chizvarwa chazvino sezvo izvozvi zvimwe zvekushandisa hazvina Google masevhisi saka uchafanirwa kutsvaga hupenyu hwako kuti uise zvinhu zvakaita segoogle play.
Asi sezvandinotaura, izvo hazviitike muhuwandu hwemapiritsi aunawo iye zvino ari kutengeswa. Kukosha kwemari ivo isarudzo yakanaka.
Mahwendefa eChishanu eChishanu
Mahwendefa eCyber ​​​​Monday
Prime Day mapiritsi